Kaominina Ivato : hatsangana ny Tranompokonolona vaovao | NewsMada
Kaominina Ivato : hatsangana ny Tranompokonolona vaovao
Natao ny talata teo ny ady fototra ny Tranompokonolona vaovao ao amin’ny kaominina Ivato, fokontany Ankadindravola. Mirefy 24m ny halavany ary 7 m ny sakan’ity fotodrafitrasa vaovao ity. Mahazaka olona hatrany amin’ny 800 ny trano rehefa vita.
“Hotanterahina ao anatin’ny roa volana ny asa ary natao ho an’ny mponina eo an-toerana io trano io”, hoy ny ben’ny Tanàna Randrianarisoa Penjy.
Mitentina 100 tapitrisa Ar ny tetibidin’ny trano raha notombanan’ireo mpandraharaha mpanao taotrano vaventy. Manodidina ny 20 tapitrisa Ar kosa anefa ny hahavitana izany satria raisin’ny kaominina an-tanana amin’ny alalan’ ireo mpanao trano efa mpiara-miasa ny raharaha rehetra.
Nangonina tsikelikely ny fitaovana toy ny biriky sy ny vatokely ary ny kojakoja ilaina amin’ny taotrano. Avy amin’ny hetra aloan’ny vahoaka avokoa no nahafahana nividy izany fitaovana izany ka nahafahana manao ny asa.
“Mitohy hatrany ny asa fanasoavana ny vahoaka sy fanatsarana ny tanàna ataon’ny kaominina”, hoy hatrany ny ben’ny Tanàna. Hanomboka tsy ho ela ihany koa ny fananganana ny EPP vaovao ao amin’ny amin’ny fokontany Tanambao izay ahitana efitrano enina.
Miandry ny fanamboarana ny tsena ihany koa ny mponina ao Ivato izay efa fampanantenan’ny praiminisitra ny hanatanterahana izany.